Firefox ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် | အိမ့်မှူးသော်
ကျွန်တော် ဒီတခါပြောပြချင်တာက Firefox အသုံးပြုသူများအတွက် ဆော့ဝဲမလိုဘဲ speed မြှင့်တဲ့ Add-on လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကို Firefox မှာ run ထားလိုက်ရင် မိမိရဲ့ firefox လေးအရင်ကထက်ပိုပြီးမြန်ဆန်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လုပ်နည်းလေးကဒီလိုပါ။ အရင်ဆုံး ဒီလင့် လေးကိုသွားလိုက်ပါ။
ရောက်ပြီဆိုရင် Add to firefox ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် ခဏစောင့်ပါ။ Install Now လို့ပေါ်လာတဲ့အခါ အဲဒီကောင်လေးကို ကလစ်ပေးပါ။
ပြီးရင် Firefox ကို restart ပေးလိုက်ပါ။
Firefox ပြန်ပွင့်လာတဲ့အခါမှာ Tools ကနေ Tweak Network Setting ကို သွားပါ။
အဲဒီမှာ box လေးတစ်ခုပေါ်လာပါ့မယ့် ။
Pipelining နဲ့ Proxy pipelining ဆိုတာမှာ အမှန်ခြစ်လေးပေးပါ။ Power ကိုနှိပ်ပါ။ Apply and Ok ။ ပြီးပါပြီ
တောသား 12:54 PM
Your οwn article proѵіdes eѕtablіshed beneficial to
us. It’s really useful аnԁ you're naturally very well-informed of this type. You possess popped my personal eye in order to different views on this particular subject matter together with intriguing and solid articles.
Feel free to visit my webpage - phentermine
Hello there! This post couldn't be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I'll forward